धर्म दर्शन Archives - Nepali in Australia
December 13, 2021 autherLeaveaComment on यि ६ उपाय अपनाउनु तपाईलाई कहिल्यै पैसाको कमि हुँदैन
एजेन्सी । मानिसको जिवनमा पैसा सबै थोक होइन तर धेरै थोक भने हो । पैसाले मानिसले धेरै आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । अब नयाँ वर्ष २०२२ आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । आउने वर्षले आफ्नो जीवनमा खुशी ल्याओस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । धेरै प्रगति गर्नुहोस् र आर्थिक समस्याको सामना नगर्नुहोस्। ज्योतिष शास्त्रमा केही […]
November 23, 2021 autherLeaveaComment on पाथीभरामा तीर्थयात्रीले चढाएको ८ करोड बढी बैंक मौज्दात
ताप्लेजुङ । देशकै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा तीर्थयात्रीले चढाएको ८ करोड रुपैयाँ बैंक मौज्दात रहेको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (सरकारीद्धारा गठित) मा चालू आव २०७८ को असारमसान्तसम्म ३ करोड २७ लाख ३० हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ बैंक मौज्दात छ । पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संबद्र्धन समिति (समुदायस्तरमा गठित) मा ३ करोड […]
November 12, 2021 autherLeaveaComment on शुक्रबार लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पूजा गर्नाले मिल्छ यस्तो लाभ (पूजाविधि सहित)
September 20, 2021 autherLeaveaComment on सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कति ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य रु दुई सयले घटेको छ । छापावाल सुन आइतबार रु ८९ हजार एक सयमा कारोवार भएको थियो ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८८ हजार नौ सय तोकिएको छ । त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८८ हजार ४५० कायम […]
September 20, 2021 autherLeaveaComment on स्वास्थानी माताको मुर्तीमा के भयो यस्तो ? स्थानिय बासीन्दा र संस्कृतिविद् पनि चकित्
काठमाडौँ । दोलखा भीमसेन, नाला भगवतीलाई बेला बेलामा पुसिना आउने कुरा त तपाईले सुन्नुभएकै छ । तर स्वस्थानी माताको मुर्तीमा पनि पसिना आएपछि स्थानिय छक्क परेका छन् । अब के होला भन्ने डर पनि छ । शनिवार बेलुका नित्य पुजा गर्ने बेलामा मन्दिरका पुजारीले माताको मुर्तीमा पसिना आएको देखेपछि सबैलाई खबर गरे । अनुहारमा आएको […]
September 17, 2021 autherLeaveaComment on चो’टपटक–दु’र्घटनाबाट बच्न, नाफा कमाउन आज विश्वकर्मा पूजामा बिहानै गर्नुहोस् यी कार्य
काठमाडौ । आज असोज महिनाको १ गते अर्थात कन्या संक्रान्तिलाई निर्माण तथा प्रविधि उत्पादन तथा अध्ययनका विद्वान श्री विश्वकर्मा बाबाको पूजाका रुपमा पनि मनाउने गरिन्छ । यो दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्विहरू उहाँ विश्वकर्मा बाबाको सम्मानमा पूजाआजा गर्ने गर्दछन् । विश्वकर्मा बाबा देवताहरुकालागि शिल्प विशेषज्ञ र हरेक देवताका भवनहरुको निर्माता, ह’तियार शि’ल्पकार र यानहरुका रचयिता […]
August 12, 2021 EditorLeaveaComment on यस दिशामा नराख्नुहोस् कुचो, निम्त्याउन सक्छ घरमा बर्बादी
काठमाडौँ । पूर्वीय शास्त्रहरूमा मनुष्यको जीवनमा दुई कुराले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख छ : भाग्य र वास्तु । तपाईंको भाग्य ठीक छ तर वास्तु गडबड छ भने प्रयास गरेकोभन्दा आधी फल मात्र पाइन्छ। ईशान कोण र नैऋत्य कोणलाई ठीक राख्दा हाम्रो वास्तु ठीक हुन्छ। ईशान भन्नाले उत्तरपूर्वी कोण हो । यस कोणमा अपवित्र वस्तुहरू अनि […]
August 4, 2021 autherLeaveaComment on पर्समा सधैँ बोकेर हिड्नुहो’स् यी मध्ये कुनै एक चीज, हटेर जान्छ पैसाको कमी
वास्तुशास्त्र अनुसार केही यस्ता चिज छन्, जुन तपाईले सधै पर्समा राख्नुभयो भने पैसाको कमी हटेर जान्छ। पैसा हातमा नटिक्ने धेरैको समस्या हुन्छ। यस्ता केही चिज छन्, जुन चिस पर्समा राख्दा पैसाको समस्या हटेर जान्छ। लक्ष्मी माताको फोटोः वास्तुशास्त्र अनुसार पर्समा धनकी देवी लक्ष्मीको फोटो राख्दा पर्स कहिलै खाली हुदैन् । चामलको पोकाः बास्तुशास्त्र अनुसार चामल […]
July 31, 2021 autherLeaveaComment on साउन महिनामा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती, अन्यथा रुष्ट हुन्छन् भोले बाबा !
अहिले साउन महिना चलिरहेको छ। साउन महिनामा भगवान शिवको विशेष कृपा प्राप्त गर्नको लागि भोलेनाथको पूजा-आराधना गरिन्छ। साउनको सोमबार व्रत बस्दा कन्याले मनचाह वर प्राप्त गर्छन् भन्ने व् विश्वास रहेको छ। त्यस्तै, भगवान शिवको पूजा गर्नाले स्वास्थ्य तथा आरोग्यको वरदान प्राप्त हुन्छ। साउन महिनामा व्रत बस्ने मानिसले केहि विशेष नियमको पालना गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि […]
फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य बढ्यो बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
July 28, 2021 autherLeaveaComment on फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य बढ्यो बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ३ सयले बढेको छ। बुधबार सुन तोलामा ३ सयले बढेर ९२ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ। तेजावी सुनको मूल्य ९१ हजार ६ सय कायम गरिएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ। आज चाँदी तोलाको १२ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको […]